राष्ट्रपतिको जन्मगाउँ मानेभञ्याङमा पानी समस्या हट्यो : RajdhaniDaily.com sharethis
भोजपुर । पानीको अभाब झेल्दै आएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जन्मस्थान भोजपुर मानेभञ्याङका स्थानीयको समस्या हटेको छ । विगत लामो समयदेखि पानीको समस्यामा रुमलिएका यहाँका स्थानीयको पिखुवा खोला मानेभञ्याङ लिफ्टिङ आयोजनाको काम समापन भएसँगै समस्या हटेको हो ।
पानीको कारण स्थानीयले गाउँ नै छाड्दा यस ठाउँ प्राय खाली जस्तै बनेको छ । विगतमा ८७५ घर रहेकोमा यहाँ अहिले ४२० घर मात्र बाँकी छन् । पानीको पर्खाइमा लामो समय बिताएका उनीहरुको सपना अब भने पुरा भएको छ ।
रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको ५ मा रहेको यो स्थानमा धेरै खेतियोग्य तथा उर्वरभूमि छन् । बस्ती छाडेर स्थानीय बाहिर जादा धेरै जमिनहरु बाजिएका छन् । बस्ती उजाड बनेको छ । एक मात्र पानीको विकल्पमा बसेका स्थानीयलाई ३२ सय मिटर तल रहेको विखुवा खोलामा डीप बोरिङ गरेर पानी बस्तीसम्म पु¥याइएको हो । यहाँको पानीको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै २०७३ साल जेठ महिनाबाट खानेपानी आयोजनाको काम शुरु भएको थियो ।
खानेपानी तथा सरफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुरको रु.१२ करोड ४५ लाख लागतमा खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएको आयोजना उपभोता समितिका अध्यक्ष दीपक तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँका ४२० घरमा पानी पुगेको छ भने पानीलाई बस्तीसम्म लानको लागि मुख्य लाइनमा ४० हजार लीटर क्षमताको चार ओटा ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । त्यस्तै बस्तीमा पानी वितरणको लागि ७५ र ५५ हजार लिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै २० हजार लिटर क्षमताका छ ओटा शाखा ट्याङ्की निर्माण भएका छन् ।
अध्यक्ष तामाङले भने, ‘लामो समयको मेहनतले काकाकुल भएको वस्तीमा पानी खसाल्न सफल भएका छौँ । हाम्रो भेगमा आठ सय बढी परिवार थिए, तर पानीको कारण झण्डै ५० प्रतिशत घरपरिवारले बस्ती छाडे । अब बाँकी रहेका घरपरिवारको भने पानीको समस्या अन्त्य भएको छ । धेरैपछि भएपनि पानीको अभाव हटेको छ ।’
आयोजना सम्पन्न भएपनि यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि मासिक २०० न्यूनतम शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै न्यूनतम शुल्क भन्दा बढी पानी उभोग गर्ने उपभोक्ताले प्रतिलिटर रु. १५ पैसाका दरले शुल्क बुझाउने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । ‘आयोजनाको काम सकिए पनि खानेपानी कार्यालयले औपचारिक रुपमा उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । तर पनि यसको दिगोव्यवस्थापनको लागि मासिक न्यूनतम रु.दुई सय र बढी प्रयोग गर्नेलाई प्रतिलिटर १५ पैसा लिने निर्णय गरेका छौँ । यहाँबाट उठेको रकमले विग्रिएमा मर्मत सम्भार गर्ने तथा अन्य विविध व्यवस्थापन गर्ने सोच छ । यो शुल्कलाई पनि अन्य कुनै दिगो आर्थिक श्रोतको व्यवस्था गरेर हटाउने योजना पनि छ,’’ अध्यक्ष तामाङले भने ।
पानीलाई बस्तीमा पु¥याएर वितरण गर्न सफल भएपनि विद्युतका कारण केहि समस्या उत्पन्न अध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो । विद्युत नियमित नहुने, आएपनि भोल्टेज घटबढ हुँदा पानी तान्न प्रयोग गरिएको पम्पमा भएका उपकरणहरु, क्षति हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
तामाङले भने,‘ हामीले खोलाको पानी बस्तीमा ल्याएर वितरण गर्ने भनेर कामको थालनी गर्दा धेरै स्थानीयले विश्वास नै गरेका थिएनन् । पानी ल्याएर वितरण गर्न त सफल भएका छौँ तर विद्युतको कारण भने हामीलाई अत्यान्तै समस्या छ ।
कहिले आउदैन, आइहाल्यो भने भोल्टेज, घटीबढी हुँदा उपकरणमा क्षति भइरहेको छ । यसरी विद्युत् आउदा तथा उपकरणमा क्षति पुग्दा पानी वितरणमा अवरोध हुने गरेको छ । पछिगएर यो चाही जटिल समस्या हुने हो भन्ने हामीलाई चिन्ता थपिएको छ ।’
खानेपाने कार्यालयले स्थायीत्व हुने गरी नै विद्युत्को आपूर्ति गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ । जोडिएका उपकरणलाई विद्युतका् कारण क्षति पुग्ने भएकोले नियमित पानी वितरण अवरोध हुने खतरा रहेको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय भोजपुरका प्रमुख बिजय कुमार यादवले जानकारी दिए।
प्रमुख यादवले भने,‘ हाम्रो पहल, प्रयत्न तथा उपभोक्ता समितिको सकयृताको कारण आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ । बस्तीमा पानी वितरण भएको छ । तर विद्युत्को कारण भने त्यहाँ समस्या छ । त्यसको निराकरणमा विद्युत् कार्यालयलाई पनि ध्यानदिन म अनुरोध गर्छु । विद्युत् बाहेक तत्काललाई अन्य वैकल्पिक उपाय छैन् ।’
खोलाको पानी बस्तीमा खस्दा स्थानीय पनि खुसी भएका छन् । पानी घरकै धारामा झर्दा अत्यान्तै हर्ष लागेको स्थानीय दिपेन्द्र कार्कीले बताए ।
कार्कीले भने,‘ एक गाग्रो पानीको जोह गर्न बिहान दुई बजे उठेर जादा बल्ल दश बजे घर आईपुन्थ्यिो । पानीको समस्याले धेरै साथीहरुले गाउँ छाडे । म चाहि सधै यस्तै त नहोला नी भरेर बसँे । अहिले घरमा पानी आयो । यो देख्दा सपना जस्तो लाग्छ । ढिलैभएपनि हाम्रो पिउने पानीको सपना पुरा भयो । गाउँबस्तुलाई पानी खुवाउन सजिलो भएको छ । खेर गएको पानीलाई सदुपयोग गरेर तरकारी उत्पादन गर्न सकिएको छ । अहिले हाम्रो गाउँको मुहार नै फेरिएको छ ।’
१०÷१२ वर्ष अघिसम्म पानीकोसमस्या नभएपनि सडक २०७२ को भुकम्पपछि गाउँ बस्तीमा भएका सम्पूर्ण पानीको मुहान सुकेको ६८ वर्षीय स्थानीय बृद्ध लाखमान तामाङले बताए। यहाँका मुहान सुकेपछि स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको उनको भनाइ छ ।
तामाङले भने,‘ १०÷१२ वर्षअघिसम्म यहाँ पानीको केहि समस्या थिएन । प्रशस्त मात्रामा पानी थियो । गाउँपनि हराभरा थियो । पछि आएरपनि मुहान सुक्दै गएपनि बस्ती उजाड बन्दै गयो । केहि जरुवा मुहानहरु सडक विस्तारले सुके, केहि केहि बाँकी थिए । भूकम्प आयो, भूकम्पपछि त बस्तीका प्राय सबै नै मुहान सुकेर गए । अहिले कतै परपर खोलाका आसपासमा मात्र मुहान देख्न पाइन्छ । गाउँ छेउमा कहि मुहान नै छैन ।’
पानी नभएपछि उत्पादनमा समेत कमि आएको उनको भनाइ छ । अलिअलि कमाई लगाएपनि तल्लो भेगममा बादर तथा अन्य वन्यजन्तुले दुखः दिने गरेको उनले बताए । ‘गाउँमा पानीको समस्या भएपछि एकपछि अर्को समस्या थपिदै भयो । पहिला बस्ती भरिलो थियो । सबै ठाउँमा कमाई लगाइन्थ्यो । पानी नभएपछि धेरैले गाउँ छाडे ।
सयाँै मुरी धान मकै फल्ने खेतबारी बाँजिएका छन् । तल्लो भेगमा खेतबारी बाँजिएपछि गाउँमा बाँदरको आतङ्क बढेको छ,’ उनले भने । अबभने पानीको कारण हुने बसाँइसराई रोकिनेमा स्थानीय आशावादी देखिएका छन् ।
आज नेवार समुदाय यःमरी पुन्ही मनाउँदै
दलहरू, खानेबेलाका अभागी नबन !
प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल
यसपाली शाली नदीमा भक्तजन घटे